Teaching — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Sida qaar ka mid ah aad oga, Aan aabbe ahay cusub. Wiilkaygiiyow, S, waa shan bilood jir. Oo isna wuxuu had iyo jeer ku faraxsan, marka laga reebo marka aan ku riday meeshuu in hurdo. Waxa uu si degdeg ah u lumiya maskaxdiisa. Waxa uu si dhab ah u maleeyo inaan aynu isaga tagay inay ka soo weeciyaan nafsaddiisa oo dhan dhibaatooyin ku wareegsan, sida daal iyo u baahan inuu xafaayadda bedelay.
Laakiin hal maalin ayuu helay oo farxad u ah caanonuug ah oo gacantiisuu ku dhegay. Waa wax is-dabacsan uu baxay tirada. Oo markuu gacanta geliyaa afkiisa - iyo dhab ahaantii wuxuu ku tukhaantukhiyo in ay jiraan - uu ka illoobayo ku saabsan oo dhan Dhibaatooyinkooda oo. Waxa aanu si dhab ah ma beddeli xaqiiqada ah in aan isaga keligiis ayuu hadhay ee uu qolka, laakiin gacanta ka dhigaysa halmaansiiyay ku saabsan.
Well, Waan ogahay in qof walba halkan maanta ayaa dhibaato weyn ka hurdada oo keliya qolka a. Waxaan leenahay arrimaha lacagta, arrimaha guurka, arrimaha caafimaadka, iyo wixii la mid ah. Oo la mid ah wiilkayga, waxaan mararka qaarkood ay raadiyaan habab si ay ula qabsadaan dhibaatooyin our. Ma doonayno in ay dareemaan xanuun iyo dhib. Sidaas aawadeed waxaannu u jeesanaynaa wax ka dhigi noo illowdaa, waxa ku saabsan. Laakiin waa in sida ugu wanaagsan ee loo wax ka qaban? Maaweelada?
Oo wax kasta oo ay jiraan wax badan oo uu bilaabo inuu la qiimo tiro. Qiimaha wax isbeddelllada ku salaysan sida badan waxaa ka mid ah, waxaa jira. Marka ay jiraan 100 cookies miis ka dib markii adeeg aad sii yaabaa in hadalka in muddo ah. Laakiin marka ay jiraan cookies wax yar uun, waxay u muuqdaan kuwo qaali ah. Waxaad malaha degdegin doonaa halkaas oo haddii aad hesho mid ka mid ah waqtiga, in…
Waxaa jira waxyaabo yar kicin jacaylkiinna oo qalbigayga, waayo, Ciise sida maqalka Masiixiyiinta cusub - ama wax Masiixiyiinta - dhigi xirfadaha guud ee ay Iimaan aasannay baabtiiska. Waxaan qabaa in qaar ka mid ah saaxiibaday, in kastoo, oo ahaa brand Masiixiyiinta cusub iyo kuwo wax yar wareersannahay waxa uu sheegay in loogu tala galay. Waxay maqli News Good in they've la sameeyay xayawaan cusub, in ay Leeyihiin Quluub cusub, in ay la maydhay oo xaq. Oo waxay u malaynayaan taasi ka dhigan tahay waxay mar dambe ku dhibtoon doonto ama jirrabaadda wejiga. Laakiin qof who's ahaa Christian ah muddo wiig ah u sheegi kartaa inaad run ma that's. Su'aasha ma aha in aan jirrabaadda wajihi doonaan. Su'aashu waxay tahay, sida aan ka jawaabi doonaan jirrabaadda?
Waxaan akhriyey xigasho todobaadkan yidhi, "Dadka oo dhan baa la jirrabo. Ma jiro nin nool oo aan la hoos u jebin karo, siiyaa waa inaydnaan jirrabaadda saxda ah, ku riday barta saxda ah. "Tani ma war qoraal ah oo run ah? Ayaa waxaa mar uun nin iska caabin ah xitaa ugu fiican kaalinta jirrabaaddo? Well, Kaalay nala soo jeedin in Luke 4:1-2:
Ciise, waxaa ka buuxsamay Ruuxa Quduuska ah, oo Webi Urdun ayuu ka noqday, oo uu hoggaaminayo Ruuxa ku jira…
Waxa kale oo aad la hadli kartaa ee ku saabsan fannaaniinta sida Lil Wayne. Waxaa jira qaar ka mid ah heesaa, kuwaas oo kaliya doonayaa in aan noqdo caan ah oo lacag. Ma Lil Wayne. Waxa uu doonayaa in uu noqdo ugu weyn ee…